Kaddib ku biiristii Aaron Wan-Bissaka ee kooxda Manchester United, wax ka baro 10-ka daafac ee ugu qaalisan taariikhda kubadda cagta – Gool FM
(Yurub) 30 Juunyo 2019. Manchester United ayaa Sabtidii shalay ahayd si rasmi ugu dhawaaqday inay dhameystirtay heshiiska Aaron Wan-Bissaka, kaasoo kaga soo dhaqaaqay kooxda Crystal Palace.
Sida laga soo xigtay website-ka rasmiga ah ee kooxda Manchester United, ciyaaryahanka ayaa saxiixay qandaraas shan sano ku heyn doono garoonka Old Trafford.
Hadaba iyadoo ay taasi jirto, Aaron Wan-Bissaka ayaa wuxuu dhinaca kale qeyb ka noqday liiska 10-ka daafac ee ugu qaalisan adduunka, kuwaasoo kala ah:
1- Virgil van Dijk:
Daafaca kooxda Liverpool ayaa wali hogaaminaya liiska daafacyada ugu qaalisan kubadda cagta, kaddib markii ay Reds ay bishii Janaayo 2017 kala soo saxiixatay Southampton, qiimo lagu sheegay 85 milyan oo euros.
2- Lucas Hernandez:
Daafacan reer France ayaa liiskan kasoo galay kaalinta 2-aad, kaddib markii ay Bayern Munich bixisay lacagaha ay ku kansashay heshiiskiisa kooxda Atletico Madrid ee gaarsiisnaa 80 milyan euro.
3- Aymeric Laporte:
Manchester City ayaa 65 milyan euro kaga soo iibsatay daafaca reer France Aymeric Laporte kooxda Athletic Bilbao bishii Janaayo ee 2018, kaasoo ah qiimaha lagu kansalay heshiiskiisa naadiga reer Spain.
4- Benjamin Mendy:
Waa daafac kale oo ka tirsan Manchester City wuxuuna liiska kaga jiraa kaalinta 4-aad, kaasoo kaga soo dhaqaaqay kooxda Monaco sanadkii 2017-kii qiimo lacageed lagu sheegay 58 milyan euro.
5- John Stones:
Waa daafaca saddexaad ee liiskan qeybta ka ah ee ka tirsan Manchester City, taasoo ka dhigeysa in Sky Blues ay hogaamineyso liiska daafacyada ugu qaalisan addunka, waan John Stones, kaasoo 66 milyan euro kaga soo biiray Everton sanadkii 2016ka.
6- Aaron Wan-Bissaka:
Daafaca reer England ayaa suuqan xagaaga ugu biiray kooxda Manchester United heshiis ku kacay 55 milyan euro ah, wuxuuna kaga soo dhaqaaqay Crystal Plus.
7- Kyle Walker:
Waa daafac kaloo 4-aad ee ka tirsan kooxda Manchester City waana Kyle Walker oo ay 53 milyan euro kaga soo iibsadeen kooxda Tottenham sanadkii 2017.
8- Éder Militão:
Daafaca cusub ee kooxda Real Madrid Éder Militão ayaa 50 milyan oo euros kaga soo dhaqaaqay Porto suuqan xagaagan.
9- David Luiz:
Daafacan reer Brazil ayaa ka soo dhaqaaqay kooxda Paris Saint-Germain, wuxuuna dib ugu soo laabtay Chelsea sanadkii 2016-kii qiimo dhan 49.5 milyan euro.
10- Ferland Mendy:
Ferland Mendy ayaa xagaagan ku yimid kooxda Real Madrid 48 milyan euro, kaddib markii uu kasoo dhaqaaqay naadiga Monaco.